Askarta Dowladda oo 19 Gabdhood Bishan Ku Kufsaday Wadada Muqdisho Iyo Baydhabo. – Calamada.com
calamada June 21, 2018 1 min read
Dhibaato aad u xanuun badan ayaa ka taagan wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo halkaas oo si joogto ah loogu kufsado gabdhaha Soomaaliyeed.
Guddiga xuquuqul Insaanka maamulka K/galbeed oo shir wada yeeshay maalintii shalay oo ay taariikhdu ku beegnayd 20-06-2018, ayaa sheegay in dhibaato adag ay ka taagan tahay wadada xiriirisa labada magaalo.
Bayaankooda ayaa waxa ay ku sheegeen in bishan oo kaliya wadada lagu kufsaday 19 gabdhood oo ay hooyooyin, waayeello iyo gabdho caruur ah ku jiraan.
Guddoomiye ku xigeenka guddiga xuquuql insaanka ee K/galbeed Qaasim Moogow ayaa saxaafadda u sheegay in 9-kii bishan ay ciidamadu kufsadeen 11 haween ah, maalmihii ka dambeeyayna si kala gooni gooni ah ayaa loo kufsaday 8 gabdhood taas oo ka dhigan in muddo 13 maalmood oo kaliya lagu kufsaday 19 gabdhood.
Cirdiga gabdhaha Soomaaliyeed ee muslimaadka ah ayaa sidaa loogu tumanayaa Diinta islaamka meel weyn ayay geysay sharafta gabadha Muslimadda ah Duullaan dhan ayuu Nabigeena Muxamad SCW ku qaaday gabar uu nin Yahuud ah marada ka jiiday, Soomaaliyana waxaan u joognaa gabdhihii qiimaha badnaa oo darsin darsin loo kufsanayo walibana lagu faanayo.
Magaalooyinka iyo deegaannada ay xoogga ku joogaan ciidamada AMISOM iyo kuwa Xabashida Itoobiya waxaa ka dhaca gabool fallo ka dhan ah dumarka Soomaaliya sida kufsi dhac iyo bahdil dhan walba ah.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 07-10-1439 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 07-Shawaal-1439 Hijri.